Fitakiana fitsaram-bahoaka indray… : rotaka tany Ambanja, olona 6 naratra voatifitra | NewsMada
Fitakiana fitsaram-bahoaka indray… : rotaka tany Ambanja, olona 6 naratra voatifitra
Par Reflets sur 17/03/2017
Nipoaka indray ny savorovoro, mbola vokatry ny fitakiana fitsaram-bahoaka ihany, tany Ambanja, omaly. Nitaky hamoahana ireo olona telo voarohirohy ho namono nahafaty lehilahy tao amin’ny fonja ny andian’olona. Voatery nanapoaka grenady lakrimozena sy nitifitra ny mpitandro filaminana. Vokany, enina no naratra voatifitra, ka mpianatra ny efatra amin’ireo.
Raikitra ny fifanjevoana tao Ambanja omaly. Nanakatona ny trano fivarotany ireo mpivarotra, tapaka ny lalam-pirenana, novarana ny mpianatra tao amin’ny Ceg Ambanja sy ireo mpianatra tamin’ny sekoly tsy miankina sasany. Nihororoho ny mponina tao an-toerana. Antony, fitakiana famoahana ireo olona telo nampidirina am-ponja izay voalaza fa nahafaty olona. Nitaky ny hamoahana ireo olona telo ireo mba hanaovana fitsaram-bahoaka ny fianakaviany niaraka tamin’ireo andian’olona marobe.
Voalazan’ny fampitam-baovao avy amin’ny lehiben’ny distrikan’Ambanja, Jhonny Patrick, lehilahy iray niharan’ny vonoan’olona feno habibiana ny 24 febroary 2017 lasa teo. Handeha hividy katy izy io niaraka tamin’ny lelavola 2 tapitrisa Ar. Olona telo no ahiahina ho tompon’antoka tamin’izany. Niantso zandary avy hatrany ny sefom-pokontany tao Anosifaly ao anatin’ny distrikan’Ambanja mba hampiakatra ireo olona voarohirohy ireo, afakomaly alina. Nentina niakatra io alina io ihany anefa ireo olona telo voasambotra ka naiditra am-ponja avy hatrany. Fantatry ny fianakaviana anefa fa hoe efa naiditra am-ponja ireo olona voarohirohy ho namono nahafaty ny havan’izy ireo. Omaly maraina, tonga tao amin’ny fonjan’Ambanja ny fianakaviany sy ny andian’olona marobe nangataka ny hamoahana ireo olona voarohirohy ireo mba hanaovana fitsaram-bahoaka araka ny fangatahan’izy ireo hatrany.
Nikasa hiditra an-keriny tao amin’ny fonja, araka izany, ireto andian’olona marobe ireto hamoaka ireo olona voalaza fa namono nahafaty ny havan’izy ireo. Efa nihatrana teo an-toerana anefa ny mpitandro filaminana sy ny avy amin’ny mpandraharaha ny fonja niandry ireto andian’olona marobe ireto. Nirefodrefotra amin’izay ny tifi-danitra sy ny grenady lakrimozena nalefan’ny zandary sy ny polisy mba hanaparitahana ireto andian’olona ireto efa teo am-bavahadin’ny fonja. Vokany, olona enina no voalaza fa naratra voatifitra. Hoe nandalovan’ny bala. Misy no mpianatra ao amin’ny Ceg Ambanja, misy koa ny avy ao amin’ny kolejy Venance Manifatra. Avy nirava nianatra izy ireo no izao sendra ny fifanjevoana izao.
Couvre feu ny tanànan’Ambanja…
“Efa nisy ny fepetra noraisina manoloana ity raharaha ity. Misy ny fepetra tsy fahazoana mivezivezy amin’ny alina (couvre feu) manomboka amin’ny 6 ora hariva. Tsy maintsy mikatona avokoa ireo toeram-pivarotana toaka. Miankina amin’ny fivoaran’ny toe-draharaha no ahafahana manajanona izany”, hoy hatrany ny lehiben’ny distrikan’Ambanja.
Nentina haingana ao amin’ny hopitalin’Ambanja ireo olona naratra. Ny roa no voalaza fa tena voa mafy ka tsy maintsy nandalo fandidiana haingana. Efa tonga ao Ambanja koa ireo zandary avy any Nosy Be Hell Ville sy Antsiranana hanampy tosika ireo zandary sy polisy ao ao an-toerana.
Samy milaza ho tsy manaiky fitsaram-bahoaka daholo ny mpitondra fanjakana. Ny eo tsy voavaha ny olana, izao ity mipoitra indray ary vao mainka mihazo vahana hatrany ny fitsaram-bahoaka sy/na fitakiana olona atao fitsaram-bahoaka. Resabe fotsiny fa tsy misy fandraisana andraikitra matotra avy amin’ny fanjakana manoloana ity fitsaram-bahoaka miseholany isan’andro ity. Polisy niharan’ny fitsaram-bahoaka no fototry ny olana tamin’ilay raharaha ao Antsakabary. Tsy hita mangirana anefa ny fanadihadiana hatramin’izao. Zandary iray koa no efa matin’ny fitsaram-bahoaka tany Mananjary ka nahavoatery nanafoanana ny tobin’ny zandary ao an-toerana. Fahasahiana tsy misy toy izany satria tsy vitan’ny manafika tobin’ny mpitandro filaminana fa hatrany amin’ny fonja aza ity sahin’ny olona hotafihina. Toerana saropady anefa ny fonja, ka tsy maintsy mandray ny andraikiny ny mpitandro filaminana. Dradraina isan’andro anefa ny fiarovana ny zon’olombelona kanefa hita amin’izao fa mihapotika hatrany ny maha olombelona. Atahorana hiitatra any amin’ny tondro-molotra ity fitsaram-bahoaka ity.